13th February 2019 - Samasta Khabar
सामसुङ ग्यालेक्सी एम १० नेपाली बजारमा, काठमाडौँ भित्र फ्रि डेलिभरी
सामसुङ कम्पनीले आफ्नो नयाँ मोडलको फोन सामसुङ ग्यालेक्सी एम १० नेपाली बजारमा विक्री सुरु गरेको छ । मंगलबारबाट कम्पनीले सस्तो मूल्यमा एडभान्स फिचरसहितको नयाँ मोडल नेपाली बजारमा विक्री सुरुवात गरेको हो । दिउँसो १ बजे अगाडी अर्डर गरे त्यही दिनमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सामसुङको उक्त फोन स्मार्ट डोकोबाट खरीद गर्दा रु. १३ हजार ७९० मा किन्न सकिने र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र फ्रि डेलिभरीको सुविधा समेत पाउने बताइएको छ ।
नेपालीलाई एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको जलविद्युत सेयर
13th February 2019 28th March 2019 avigo
नेपाल सरकारले नागरिकका लागि एक खर्ब दुई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको जलविद्युत आयोजनाको सेयर दिने भएको छ । जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रमअन्तर्गत उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले तीन हजार मेगावाट बराबरको १९ जलविद्युत आयोजनामा नेपालीलाई सो बराबरको सेयर दिन लागेको हो । आजको कारोबार दैनिकका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिहीबार काठमाडौँमा जनताको जलविद्युत आयोजना नामक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै प्रदेशका आयोजनालाई समेटेर तयार गरिएको आयोजना उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले श्वेतपत्रमार्फत नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी भन्ने नाराअन्तर्गत सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत…
आर्थिक, समाचारLeaveacomment
आज मिति २०७५ फाल्गुण १ गते बुधबारको राशिफल ! हेर्नुहाेस् आफ्नाे भाग्य ।
13th February 2019 13th February 2019 avigo
मेष साथीभाइसँग भेटघाट होला । रमाइलो दिन सुखमय तरिकाले बित्नेछ । धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ । वृष मिष्ठान्न भोजन हुनेछ । आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ । आँटेको कुरा पूरा हुने समय छ । मिथुन आर्थिक संकट आउन सक्ला । मालसामान हराउन सक्ने डर छ । सचेत रहनुहोला । मनमा शान्ति छाउने देखिन्छ । कर्कट राम्रो कामको चौतर्फी चर्चा चल्नेछ । अध्ययनमा रुचि लाग्नेछ । तय गरेका कामहरु पूर्ण हुनेछन् । सिंह भूमिबाट लाभ रहनेछ । नयाँ व्यक्तिसंग भेटघाट हुनेछ । साँझपख शुभ समाचार आउन सक्छ । कन्या गरेका काममा ढिलासुस्ती…